पहिरन र ब्यक्तित्व :: राम लामा – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२६ असार २०७७, शुक्रबार ००:०९ English
पहिरन र ब्यक्तित्व :: राम लामा
मैले जानेअनुसार् पहिरनको उत्पत्ति फ्रान्सबाट भएकोले होला, अमेरिकीहरू पनि पहिरनको मामलामा युरोपेली जत्तिको सचेत देखिदैनन । पहिरन्, बोलीचाली, उठबस र रहन-सहनले हाम्रो सभ्यताको पहिचान गराई रहेका हुन्छन् । त्यस मध्यमा पनि पहिरन सबैभन्दा पहिला आउंछ, भित्र जे खाए पनि लगाउने पहिरनले उसको परिचय दिलाउंछ । त्यसमा मध्य पनि पहिरन सबैभन्दा पहिला आउंछ । कोहि ब्यक्तिसंग भेट्दा, बोल्नु अगाडी नै पहिरन देख्ने बित्तिकै उसको ब्यक्तित्वको साधारण अन्दाज लगाईहालिन्छ ।
मेरो चासो पहिरनशिरोमणी बन्ने कदापी होईन । चासो हो त, केवल नेपाली सभ्यता र त्यहि नेपाली समाजको । जिन्स पैन्ट र टि-शर्टहरू काम गर्दा या घुम्न जांदा लगाउने भन्ने बुझिन्छ । पूज-आजामा बस्दा पनि कमिज-सुरुवाल तथा ॐ लेखिएकाजस्ता धार्मिक प्रक्रितिका पहिरन लगाउने गरिन्छ । कार्यालय जांदा युनिफर्म तथा दर्जानुसारका पोशाकहरू लगाउने प्रचलन छ भने भोज-भतेरमा चल्दा आफ्नो संस्क्रिती झल्कने खालका पोशाक तथा पश्चिमा फेशनमा गनिने खालका पहिरनहरू पनि लगाउने चलन छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बिशेष महत्व राख्ने बैवाहिक कार्यक्रम् या त्यस्ता पार्टीमा जांदा पनि आफुलाई सजिलो लागेर होला टि-शर्ट र जिन्स पाईन्टमा ठांट्टिएर गएका धेरै नेपाली भद्र-भलदमीहरू मैले भेटेको या देखेको छु ।
ठांटिएको पहिरन गाउंले या जङ्गले सभ्यता हो भन्ने मेरो मान्यता कदापी होईन । हुन त हाम्रा गाउंघरमा दर्जी दाईले शरीरको बनावट अन्दाज गरेर बित्ताले नापेर सिलाएका लुगाहरू बनावट र साइज नमिलेपनि हामी मध्य कसैले लगाएकै थियौं होला । तर आज आफुलाई सुहाउने र चट्ट मिलेका टि-शर्ट र पाईन्ट लगाउनुलाई सभ्यताको बिकासै नभएको भन्न चांही मिल्दैन ।
मैले सभा-सम्मेलनका स्तरका कुरा गर्न खोजेको होईन । त्यो स्तरका ब्यक्तिहरूमा त लन्च र डिनर पार्टीहरूमा लगाईने सुटका प्रकार अनेकन हुन्छन् भन्ने कुराको हेक्का सर्वसाधारण र भिआइपी (डिप्लोम्याट्) हरूले राख्न सक्दछन भन्ने बिषयमा कसैको दुई मत नहोला । पहिरनमा पनि केही असुलहरू हुन्छन् । चट्ट सुट र टाई लगाउने अनि महंगो एवम् राम्रो खालको हो भन्दैमा सुटसंग खेल्दा लगाउने जस्तो जुत्ता लगाएको देख्दा अनवरत हांसो आउनु स्वाभाबिकै हो । कमसेकम असुल तौर-तरिका बुझ्ने कोशिश् गर्नुपर्छ भन्ने सवाल मात्र मेरो मान्यता हो । हुन त पहिरनमा सजिएर कोहि जसरी प्रस्तुत भएपनि देख्नेले केही भन्न र गर्न मिल्दैन । तर पहिरनको मुल्याङ्कन कसै न कसैले गरेको त अबश्य नै हुन्छ, जहां ब्यक्तिको उपस्थिती हुन्छ । अझ बिदेशमा रहंदा त हाम्रो नेपाली सभ्यताले हाम्रो देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ ।
झापाको विर्तामोडमा घरधन्दा गरि बस्ने चेलीहरू हुन वा गुल्मीको तम्घासमा ढिकी जांतो गरिरहने दिदिहरू होउन, जिन्दगीमा साईकलको प्याडलसम्म छुन नपाएका हात-खुट्टाले अमेरिकाको स्वतन्त्र गाडी मार्ग (फ्रीवे)मा गाडी हुंईक्याउने भाग्य र साहसलाई समय र स्थान अनुसार चल्न सक्ने क्षमता राख्ने बिषयहरुलाई गर्व गर्न सकिने ठाउंहरू प्रशस्तै छन् । चप्पल, फरिया, धोती, पटुकीमा टपक्क बांधिएर बस्ने शरीरले आज चमकदार टि-शर्ट र टपक्के पयेंठ (पाईन्ट) माथी आंखाको ज्योति लाने पेटी टांसेर हिंड्न नहिच्किचाउने तौर-तरिकालाई पनि प्रशंशै गर्नुपर्छ । परदेश या अमेरिका नै आएर भनौं, प्रथमपटक पैन्ट लगाउनुपर्दा जति अफ्ट्यारो लाग्छ, त्यो भन्दा संकोच मेरी जिवनसंगिनी श्रीमतीलाई मेरो करले पहिलोपटक मिनिस्कर्ट लगाउंदा कम संकोच नभएको कुरा आज २५ बर्षपछि सम्म पनि मलाई यो मानशपटलमा ताजै याद छ । मैले त अधबैंशे उमेर नांघेर पहिलोपटक विदेश आएर बस्न परेका महिलाहरूको कथा-ब्यथा उल्लेख गर्ने तितो साहस मात्र गरेको हुं । नयाँ पिढिंका युवतीहरुमा त पश्चिमा समाजलाई पनि माथ गर्न सक्ने पहिरनको औकात राखेको देख्दा फेशन र पहिरनको देखाशिकीको शुरुवात मेरै सगरमाथाको देशबाट हुन्छ की जस्तो पनि लाग्छ ।
उमेर अनुसारको फेशन गर्दा अझ गहकिलो देखिन्छ । छोरीले लगाउने खालका लुगा आमाले लगाउंदा शरीर त छोप्छ । तर लुगाले अंग-प्रत्यंग झन् स्पश्ट रुपमा लुगा बाहिरबाट देंखिदा कसैले उत्ताउली भन्छन् भने भन्नेको के दोश होला र ? हुन त आजकाल धेरैजसो पहिरनमा रंग मिलाएर लगाउनुपर्छ भन्ने जानकारी भैसकेको जस्तो लाग्छ । जे भए पनि कलर कन्ट्यास्टमा पनि आफूलाई आधुनिक देखिन्छ भन्नेहरू पनि आधुनिक जमानामा सान्दर्भिक नै लाग्दछन ।
मैले पहिरनका असुल अनुसार् चल्न सकेका वर्गहरुलाई ईंन्कित गर्न खोजेको होईन । त्यस्ता वर्गहरू त बधाई तथा धन्यवादका पात्रहरू हुन । मैले त ल्यांङ्फ्यांङे वर्गहरुलाई सचेत गराउन खोजेको मात्र हुं । मैले पनि अतितका तिता अनुभवबाट ‘ए मेरो ल्यांङ्फ्यांङे सभ्यताले हाम्रो देशलाई नै असर पर्दोरहेछ’ भन्ने महशुस गरेको मात्र हुं । एउटा गांठोको टाईमा हिंडेको महिनौं पछि मात्र दुईगांठे पनि हुंदोरहेछ भन्ने थाहा पाएर तीन दिन लगाएर टाईको गांठो बनाउन सिकेको अहिलेसम्म बिर्सेंको छैन् ।
स्थान र समयानुकुलको सहि पहिरनले तपाईंको ब्यक्तित्वमा निखरता अबश्य ल्याउंछ, साथ्-साथै तपाईंको कारणले हाम्रो देशले पनि यस मामलामा अलि उच्च मुल्यांकन पाउन सक्ने कुरा दुबिधा नहोला । त्यसैले फेशन गरौं, समयानुकुल गरौं, ठाउं अनुसार् गरौं र सुहाउने गरि गरौं ।
१ आश्विन २०७०, मंगलवार ०५:५२ मा प्रकाशित